DIDIER RADERT : VOANDALANA MIHANTONA NO NENTIN’NY BERIZIKY – MyDago.com aime Madagascar
DIDIER RADERT : VOANDALANA MIHANTONA NO NENTIN’NY BERIZIKY
Mitohy hatrany etsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny filoha Ravalomanana. Anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana ny CT Didier Radert avy any Antsirabe. Nilaza ny tenany fa voandalana mihantona no nentin’ny Praiministra Beriziky avy ivelany. Fitantanana bitrolahy no misy eto hoy izy. Raiso an-tsary ny zavamisy eto, hoy Didier, fa ny Praiministra miteny fa hanome vola 17millions d’euro ny UE hanatanterahana ny fifidianana. Alaivo sary antsaina hoy izy hoe misy bitrolahy mihantona eto ary etsy ambany misy karaoty(izany hoe 17millions) Nametraka ny UE fa tsy ahanome ny vola raha tsy misy ny toromariky ny firenena mikambana. Raha kapohana avy ato aoriana io bitrolahy io hoy izy dia maty avy hatrany, ka tahaka izay no mmahazo an-dRajoelina. Efa hatrany am-piandohana hoy ity mpanao politika ity, no fantatra fa raha tsy tonga eto Dada tsy misy fankatoavana. Mazava tsara ihany koa hoy izy ny fepetra apetraky ny vondrona eoropeana fa raha tsy misy fitoniana eto tsy hanome vola izy ireo. Raha mbola misy ny voahilikilika dia tsy hisy fifidianana vanona eto. Raha hifaninana fifidianana hoy izy dia tsy matahotra izahay.
3 réflexions sur « DIDIER RADERT : VOANDALANA MIHANTONA NO NENTIN’NY BERIZIKY »
Efa fantatra teto an-toerana re fa raha tsy misy ny fitoniana ara-politika, tsy misy mihitsy izany vola izany – ka mila vola maika ve rizareo é? Ny Cenit ary io efa mazava ny teniny ka mba te-hibalady rizalahy koà !
Tsara koa ny misy an’izao – izay angamba vao mazava, satria tonga teny am-potony mihitsy rizareo, fa tsy mahatoky ny eto an-toerana angamba.
HO AMINTSIKA FOANA NY TOMPO
Atao ahoana fa sao mbola misy ny azo fahanana lalitra e!!!
Mapmė be koa ity lohateny ray olona!!ltoran’ny hehy mihintsy aho.
Mbola tsy tsapan’ny lohakelin’izy ireo fa IZAO TONTOLO izao MIHINTSY NO EFA MIAOKA AZIREO.
Ka i Beriziky mihintsy koa anie no efa tsy namely hatrany am-boalohany e!!fa tsy haiko inona no mbola
nidedahana tany, nekena hono ilay FR nefa tsy nampiharina koa inona no DIKANY na nanaiky aza ny
firenena mikambana ?????mihevitra olona dia efa badraodra noho izireo mihintsy ry foza iray trano an???
Mba mahalala menatra @’izay ry Beriziky a!!MIALA dia TARITO hanaraka anao
domelina fa potika ny tanindrazana hiombonana a!!!olo-kendry ianao fa mba MANAJÁ tena.
Précédent Article précédent : FITAKIAN’NY PARAMED SY DOKOTERA : NORAVAN’NY ANDIAN’OLONA VOAKARAMA
Suivant Article suivant : “PATSA INDRAY MAHANDRO…”